राज्यमन्त्री दुगडलाई तत्काल पदमुक्त गर्नुपर्ने भीम रावलको धारणा || समाचार
राज्यमन्त्री दुगडलाई तत्काल पदमुक्त गर्न...
राज्यमन्त्री दुगडलाई तत्काल पदमुक्त गर्नुपर्ने भीम रावलको धारणा
access_time 10 Apr 2020
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी कमिटी सदस्य तथा सांसद डा.भीम रावलले कोरोनाको संकटको बेला सुलभ अग्रवालले कालोबजारी गरेको विषयमा गम्भीर आपत्ति जनाए । आज (शुक्रबार) विहान नेपाली रेडियो नेटवर्कबाट प्रशारण भएको नेपाली बहस कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गदै उनले भने, ‘देशमा उद्योगपति र व्यापारीले जे मन लाग्यो त्यही गर्न पाउँदैनन् । मैले भनेको थिएँ सरकारमा मान्छे ल्याउँदापनि पार्टीमा कुनै योगदान नभएका, त्यस्तै त्यस्तै काममा लाग्ने मान्छेहरु यसो गर्ने तर पार्टीका मान्छेहरु भूमिका गरेका छन्, यत्रो पार्टी यतिका वर्षदेखि निर्माण गरेका छन् । तिनीहरुलाई किनारामा लगाउने यस्ता प्रवृत्तिले भोलि गलत परीणामहरु आउँछ भनेर मैले सुरुमै भनेको थिएँ । त्यसकारण अहिलेपनि यस्ता कुराहरुमा गम्भिर रुपमा ध्यान दिनुपर्छ । अहिले तपाईले भनेको कुरामा यसमा क कसको संलग्नता छ ? क कसले यसमा माथिबाट सहयोग गरेका छन् ? यसको सम्पूर्ण छानबिन हुनुपर्छ । यस्तो बेलामा यस्तो कुरा आउनै नहुने हो, यो यति दुःखद् कुरा हो । देश एकातिर साझा रुपमा जुझ्नुपर्ने कुरा छ, अर्कोतिर यस्तो कुरा हुन्छ र यस्तोलाई अरु कसैले संरक्षण गरेको कुरा आउँछ भने यो त देशको लागि अत्यन्तै दुःखद् कुरा हो । सम्पूर्ण जनताले विरोध गर्नुपर्छ ।सरकारी निकायहरुले यसमा गम्भिर रुपमा ध्यान दिएर अब आईन्दा यस्ता काम नहोउन् । अहिले भएको यो गलत कामको पनि ज्वरो पत्ता लगाएर उखेल्ने काम होस् ।’ तर, कालोबजारी गर्ने सुलभ अग्रवाललाई जोगाउनको लागि सरकारकै राज्यमन्त्री मोति दुगडले दौडधुप गर्नुभएको छ ? उहाँले त मन्त्रीको झण्डावाला गाडी फहराएर अग्रवाललाई भेट्नुभयो अरे नि ? भनेर सोधेको अर्को प्रश्नमा नेता रावलले भने, ‘ऋषिजी मलाई यो कुरा थाहा छैन् । तपाईले भनेको कुरा साँचो हो भने निजलाई तत्काल पदमुक्त गर्नुपर्छ । तपाईले भनेजस्तो उहाँले भनेको हो भने राज्य सत्ताको उपहास हो ।’ उनले देशमा कालोबजारी गर्नेहरुलाई कारबाही भैरहेको स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘अघि तपाईले भनेजस्तो कहिलेकाहीँ यस्तो हुने, ठूला ठूलो भ्रष्टाचारको काण्ड हुने, त्यसलाई अमुक अमुक व्यक्तिले अमुक संरक्षण गरेकोजस्तो कुरा बाहिर प्रवाहित हुने, त्यसको जरो उखेलियो भन्ने सन्देश बाहिर नजाने भएको हुनाले कतिपय त्यस्ता कालाबजारी गर्नेहरुलाई उत्साह भैरहेको होला । उनीहरु त्यसमा प्रेरिरत भैरहेका होलान् । भ्रष्टाचारीहरु पनि प्रेरिरत भैरहेका होलान् । जे गरेपनि हुन्छ भनेर परेको होला । तर, अब सरकारले कारबाही नै गरेको छैन भनेर त भएन नि ।’
कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आफ्नो साधन र स्रोतले भ्याएअनुसार काम गरिरहेको स्पष्ट पारेका छन् । केन्द्र सरकारले पनि पिपिईलगायतका आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री पठाईसकेको उनले जनाए । अलग्गै राखिएका मानिसहरुको पनि स्वाब कोरोना परीक्षणको लागि काठमाडौं ल्याईएको उनले सुनाए । उनले भने,‘मैैले यतिले मात्रै हुँदैन्, थप उपकरण र जनशक्ति पठाउनुपर्छ भनेर मैले माग गरेको छु । पहिलो कुरा उपकरण पठाउनुभयो । धनगढीमा मात्रै पठाएर हुँदैन् । पहाडी जिल्लामा पनि पठाउनुपर्छ । कञ्चनपुरमा पनि पारीबाट मान्छेहरु आएकोले त्यहाँपनि चाहियो । त्यसको साथसाथै, स्वास्थ्यकर्मीको लागि चाहिने व्यक्तिगत स्वास्थ्य सुरक्षा पिपिई पनि चाहिन्छ । मास्क चाहिन्छ । पञ्जा चाहियो । आपूर्ति व्यवस्था सुव्यवस्थित् गर्ने ।’
काठमाडौंबाट जनता आफ्नो जिल्ला घर जान चाहन्छन् यस्तो अवस्थामा सरकारले के गर्ने ? भन्ने पत्रकार धमलाको प्रश्नमा उनले भने, ‘यस सम्बन्धमा सरकारले ठोस योजना बनाउनुपर्छ । तर, हिजोजस्तै एकछिन कुरा आयो, एकछिनमै हरायो । यस्तो कुरा गरियो भने मान्छेमा विश्वसनियता गुम्छ । यस्ता गर्नुहुँदैन् । तर, कि त सरकारले काठमाडौैंमा अलपत्र परेकाहरुको लागि व्यवस्थित रुपमा खाने र बस्नेको प्रवन्ध मिलाउनुपर्यो । अरु वस्तुहरुको पनि व्यवस्था गर्नुपर्यो । मलाई पनि यहाँ रहेका विभिन्न व्यक्तिहरुले फोन गरिरहनुभएको छ । अब हाम्रो खानेकुरा पनि सकियो, अब हामी के गर्ने ? कसो गर्ने ? भनेर फोनहरु आइरहेको छ । मैले सम्बन्धित निकायलाई त्यो कुराको जानकारी पनि गराएको छु । कि त्यो व्यवस्था गर्नुपर्यो । होईन भने ती व्यक्तिहरुलाई सुरक्षित रुपले आफ्नो गन्तव्यमा पुर्याउनुपर्यो । अब कुन विकल्पमा जाने हो त्यो कुरा सरकारमा भएका सम्बन्धित व्यक्तिले नै सोच्ने कुरा हो ।’